Fahasoavana (kristianisma) - Wikipedia
Ny fahasoavana ao amin'ny fivavahana kristiana dia ny fanampiana na tombotsoa manokana omen' Andriamanitra maimaimpoana ny olombelona mba hamonjena sy hanamasinana azy ka izany dia ny fahafahana amin' ny fanamelohana mandrakizay. Ilazana ny famelan-keloka sy ny fitiavana sy ny famindram-po ary ny fahatsaran-tsitrapon' Andriamanitra koa izany. Izany no hevitr' io teny io ao amin' ny Testamenta Taloha. Ao amin' ny Testamenta Vaovao kosa ny fahasovana dia miaraka amin' i Jesoa Kristy satria ny fahasoavana tsy manam-petran' Andriamanitra dia ambara ao amin' ny fahafatesan' i Kristy izay nanavotra ny olombelona.
Tany Andrefana dia nodinihin' ireo teôlôjiana ny fifandraisan' ny fahasoavana sy ny safidin' ny olombelona; ka niadian-kevitra sy nifanoheran' izy ireo ny fahombiazana na ny fahampian' ny fahasoavana hahazoana famonjena. Niteraka fiheverana ny fanendren' Andriamanitra rahateo izay ho voavonjy na ny tsy ho voavonjy (predestinasiona) ny fiheverana ny fahasoavana.
1 Amin' ny fiangonana katôlika
2 Amin' ny fiangonana ôrtôdôksa
3 Amin' ny fiangonana prôtestanta
Amin' ny fiangonana katôlikaModifier
Amin' ny fiangonana ôrtôdôksaModifier
Amin' ny fiangonana prôtestantaModifier
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahasoavana_(kristianisma)&oldid=1010924"
Dernière modification le 18 Aprily 2021, à 06:53
Voaova farany tamin'ny 18 Aprily 2021 amin'ny 06:53 ity pejy ity.